I-49 yabulawa ekuhlaselweni kwamasokisi amabili e-Christchurch New Zealand: uMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-15 March 2019	• 20 Amazwana
Ngokusho kwezindaba, i-49 yafa eyodwa ukuhlasela emasoskini amabili e-Christchurch, eNew Zealand. Akungabazeki ukuthi le nombolo izohlelwa phezulu. Lokho konke okuyingxenye yezingxabano ezungeze ukusebenza okunjalo kwengqondo ukwenza abantu besabe nokwesaba. Manje yisikhathi samaSulumane ngokuhlasela. Ngakho-ke ukungezwani phakathi kwamaqembu omphakathi kuqhutshwa phambili. Uma lokhu kungasebenzi uma kushukunyiswa yi-propaganda yabezindaba, ezama ukuqinisa ukungezwani phakathi kwesokunxele nokulungile kuwo wonke umhlaba, khona-ke ukuhlaselwa okunjalo kuzosiza ngokuqinisekile.
"Kodwa uMartin Vrijland, awuyikusho ukuthi lokhu kuhlaselwa kuyinkohliso?"Angiqapheli ukusho lokho nganoma yisiphi isiqiniseko. Into engikwaziyo ukukusho ukuthi ukuhlaselwa okunjalo kunomthelela ekwandiseni amaqembu omphakathi ngokumelene nomunye. Amaqembu kanye namaqembu ezombusazwe angakwesobunxele nakwesokudla azophinde asebenzise lokhu. Ngencazelo, ukuhlaselwa okunjalo kudinga izinyathelo eziningi zamaphoyisa, futhi njengoba kubikiwe emhlabeni wonke kumaphephandaba, zonke izakhamizi zizophinde zijabule ngokuthi zithathwe "eziningi zokwesabisa". Singaphinde saneliseke ukuthi ama-PC ethu asebenzisa i-pads kanye nama-Smartphones besebenzisa idatha enkulu futhi singajabula nawo wonke amakhamera namasango okuvikela abeka yonke indawo. Sizovuma isimo sethu samaphoyisa sijabule futhi sinelisekile futhi!
Ngaphambi kokuba sihambe noma yikuphi ukwahlulela nokwahlulela. Bheka ukuthi yini okungenzeka ukuthi udlale abantu nge-hypes yemidiya bese uzibuza: Singakwazi yini, ngalesi sikhathi lapho kunezinhlobo eziningi zobuchwepheshe obukhona, sibe nesithombe esisodwa salokho esinakho kumaphephandaba? ukubona ukuthi abezindaba bathola ukuzethemba?
Akukho lutho kulokho esikubonayo ku-TV okudingeka lube yiqiniso ngencazelo. Ukukholelwa ukuthi lokho okushiwo yizindaba ukuthi 'kuyiqiniso', empeleni akulutho nje 'inkolelo' esekelwe ekuthembeni. Uthemba ukuthi abezindaba bazokukhombisa iqiniso futhi babonise izindaba ezingenziwanga. Kodwa-ke, uma sibheka izinkulungwane zezigidi ezicebile ezandleni zezinkampani zabezindaba, singase sibe okusobala. Kodwa singathanda ukukholwa umfundisi esontweni. Njengompristi ohlukumeze izingane. Siyaqhubeka sithemba isonto. Ingabe lokho kusebenza nakwabezindaba?
Asifuni futhi asikholelwa ukuthi bangasidlala ngemisebenzi emikhulu yengqondo ukuze sibe nomqondo phakathi kwabantu ngendlela efunayo. Ngokwemvelo, i-polarity iholela njalo kumanje kusiqondiso esifunayo; njengoba nje ibhethri inesibalo sokuhlanganisa nesingaphansi, okwenza ngayo okwamanje. Isendlalelo esiphezulu se-elitist (esino-media ephaketheni layo) sinalo lonke izindlela esiluthole ukudala lelo polarity. Bafuna "Pegida ngokumelene no-Antifa", kwesokunxele ngakwesokudla, Christian ngokumelene Muslim, nokunye. Ukubeka ngale ndlela kubangela isisekelo sezinxushunxushu futhi kuleso chaos bahlale bedala ukuhleleka okusha, lapho ukufaka phakathi kwamandla amaningi kuhlale kungumphumela. (Funda kabanzi ngaphansi kwevidiyo)
"Yebo, kodwa ngisabona izingxoxo zangempela nabantu bangempela abadabukisayo futhi ngizwa emndenini nakubangane ukuthi bayazi abantu abafa ekuhlaseleni okunjalo". Asikwazi ukuyilawula konke. Ngakho kungaba yiqiniso, kodwa kungase kube yinto engalungile. Ake sithi kungukusebenza kwengqondo ukuqinisa ukucindezeleka phakathi kwabantu, khona-ke ungakwenza lokho ngokusebenzisa amasu amafilimu (I-AI, izixazululo ze-software ezihlakaniphile) noma umane nje obangela ukubulawa kwabantu. Kuyiqiniso ukuthi kungenzeka ukuthi ukuhlaselwa okunjalo kungokoqobo futhi kuyiqiniso. Nginitshela ukuthi awukwazi ukuthembela ngokungekho emthethweni lokho abezindaba abakubonisayo. Ngokomlando, singasho ukuthi abezindaba abanalo irekhodi elihle kakhulu lomkhondo.
Ividiyo engenhla ibonisa ukuthi ungafaka kanjani zonke izinhlobo zezithombe nge-screen eluhlaza amashumi eminyaka. Nokho, ngesofthiwe yanamuhla ungahamba kaningi. Isibonelo, ungakha ubuso obungabikho ngaphandle ngokuphelele (bheka ividiyo yokuqala ngezansi). Khona-ke ungakwazi ukunikeza izingxoxo ezibukhoma nalabo abathintekayo ubuso, lapho kubonakala sengathi lowo muntu ukhona ngempela. Ukwenza lokhu nge-software yesofthiwe yokuguqula ubuso (bheka ividiyo yesibili). Ungacabanga ukuthi ungasebenzisa kanjani izixazululo zesofthiwe ze-3 eziboniswe lapha ukuze uthathe izingxoxo zomgwaqo kubantu abangekho? Udala umuntu ongabikho (inkohliso ejulile), sebenzisa isikrini esiluhlaza ukuze ubeke umuntu endaweni yesehlakalo futhi usebenzise isofthiwe yesimo sokubuyiselwa ebusweni ukuze ubeke ubuso obusha kumlingisi wokuma. Ungalungisa ubuso bakho nezwi ukunambitha futhi kungakabiphi isikhathi unolwazi olunzulu lokungalungi nofakazi ongekho khona eduze nokuhlaselwa okuyikho emgwaqweni. Empeleni: ungakwazi ngempela ukubeka konke endaweni yesehlakalo. "Yebo, kodwa kukhona ofakazi, kwesokudla? Kukhona abantu abathi bayakwazi abantu? Ngokuqinisekile kukhona wonke amaphoyisa namaphoyisa ase-ambulensi asekhona?"Ngenxa yokuthi uneziprofetho zokuxhumana ze-social media kanye nabanye bonke abazimisele kakhulu ukuthola imali encane 'yomgomo ophakeme'.
Yebo, ukuhlaselwa okunjalo kungase kwenzeke nakanjani, kodwa ngiyaxolisa ukholo lwami kumfundisi, umpristi ohamba ngezinyawo kanye nemidiya akuyona enkulu kakhulu ngakho nginitshela ukuthi kungenzeka ukusebenza kwengqondo ngemuva kokuqhuma kwezindaba. Kumele wazi ukuthi uyakholelwa.
(Funda isihloko sokulandelela ngezithombe zokudubula lapha)
Ukuhlasela Kuhle kakhulu eholidini likazwelonke "Le Quatorze Juillet" ukugubha i-Revolution yesiFulentshi
I-CIA sikaCharlie Hebdo kumele inyuke ekukhuleni "kwamaSulumane" nge-cartoon entsha
Yeka ukuthi ukubikezela kwamaphekula kukaBill Cooper kanye neNkosana kwaphuma kanjani
Amathegi: ukuhlasela, christchurch, amaSulumane, amaSulumane, amaSulumane, I-New Zealand, ukwesaba, ukuhlasela kwamaphekula, ubuphekula, ezimbili
15 March 2019 ku-13: 57
Ngibone le vidiyo ivela ... angazi ukuthi umthombo uwuphi, kodwa kuphela irekhodi
16 March 2019 ku-02: 48
15 March 2019 ku-14: 04
"Igazi lagijima phezu kwami ​​..." kusho le ndoda ene-blouse ehlanzekile nobuso obuhlanzekile
16 March 2019 ku-03: 07
Inkinga, Ukuphendula, Ukuxazulula noma ubani?
15 March 2019 ku-15: 14
Uma ngingenanga iphutha, i-Christchurch nayo yayisezindaba eminyakeni embalwa eyedlule. Angazi ukuthi kungani kusaba khona. Ingabe kukhona uxhumano? Mhlawumbe unethuba lokuhlola lokhu.
15 March 2019 ku-15: 38
Kwakukhona ukuzamazama komhlaba ngaleso sikhathi nezakhiwo zawa ...
15 March 2019 ku-15: 41
Okunye ukuzamazama komhlaba:
15 March 2019 ku-15: 51
Iphikisana kahle nalokho okwenzeka ngesikhathi esisodwa nokuthi ngabe imithombo elawulwayo igxile ...
Bashama ukusebenzisa izinhlelo zika-Albert Pike.
15 March 2019 ku-17: 04
I-Idd + une-Ides yakho ka-March isithenjwa esilandelayo esilandelayo yi-22-3
15 March 2019 ku-17: 53
15 March 2019 ku-16: 52
Ngiyaqonda ukuthi abambalwa abahlukumezekile baboshwe njengabasolwa. Ngimangaze uma kuzoba nesilingo esibugebengu somphakathi esizobonisa isizinda nezisusa. Akunakwenzeka ukuthi omunye noma ngaphezulu wabasolwa baqhutshwa izinsizakalo zokuphepha noma bebengenawo amancane. Uvame ukubona ukuthi umuntu onjalo ukhululwa ngokushesha nokuthi awusayizwa kusuka kulowo muntu.
Ngeke sithole ukuthi ngabe siyoke sithole ukuthi ngabe 'unobameli' kanye nabahluleli baseNew Zealand njengama-omiland, eNetherlands.
15 March 2019 ku-19: 03
Ukusebenza kwefulegi yamanga ngokuhleleka kwe-SIS?
"Akekho iqembu elawula ukuhlasela kwami, ngenza isinqumo ngokwami. Nakuba ngathintana noKernights Templar ozalwa kabusha ngenxa yesibusiso ekusekeleni ukuhlaselwa, okwanikezwa. "
15 March 2019 ku-21: 06
Angizwa lutho mayelana ne-Boeing 737 Max futhi, kungaba kanjani lokho? Kubonakala sengathi umuntu ufuna ukuvikela iBoing kanye nabanikazi bamasheya.
15 March 2019 ku-21: 54
Namuhla kulula kakhulu ukushisa izizwe zonke. Babevame ukwenza okufanayo, manje sekushesha kakhulu.
E-Urk ubona indaba efanayo, intsha yobuKristu ebeka ilungelo elihle kakhulu nayo yonke imiphumela efakazelayo. Ukuhlaselwa kwe-NZ kwenza kube neminye imizwa. Abantu abaqaphela ukuthi siyadlala badlulisela ebhokisini elifanayo emithonjeni njengalesi senza umenzi wobugebengu.
Akekho ozibuza ukuthi awunayo imikhosi e-Australia ukudubula amaSulumane, akukhoKristu-isonto lizwakala kangcono. Ngoba ukuhlasela kukaKristuchurch kumaSulumane. Njengoba nje i-Urk enobungane ihlasela abaMoroccans. Uthola kanjani izikhali eziningi ezitheni lakho ezweni lapho zonke izikhali zibhaliswe?
Igama lomgcini wekholomu ### Elfie ### el- ngisho (imvamisa ephansi kakhulu) tromp = trump = icilongo kuyoba yinto engavamile.
Uma ngifunda zonke izimpendulo ngakho iningi liholwa ama-fairies ###
16 March 2019 ku-06: 51
Uphi umfana we-28 wokuzalwa othola imali yokuqala eYurophu futhi ahambele amazwe ahlukahlukene lapho ukuze anikeze umbono wakhe nenzondo. Khona-ke le nkosikazi ingaphila izinyanga ezimbalwa eDunedin, iba yilungu leqembu lokudubula bese liqasha izimoto ukwenza isenzo sakhe? Umuntu onjalo uthole kanjani ikhadi lesikweletu.
Into engicwilisayo kakhulu yikhatsi phakathi kokudubula kokubili. Ngizwile imizuzu ye-11 namaminithi we-7. Ibanga likhilomitha elingu-6, kodwa ufunda kusukela e-mosque yokuqala emotweni bese ibanga, imoto yokupaka kanye nomsikathi olandelayo bese kuleso sikhatsi isikhathi sanele. Ngoba ngihlala lapha ngokwami, ngifuna ukuthatha umzila namhlanje. Ngeshwa, imigwaqo eminingi ezungeze umkhokotshi wokudubula kokuqala yavalwa ngokuzumayo. Noma kunjalo, phakathi nesonto ngifuna ukuzama futhi ukubona ukuthi ngabe le-6 km ingafakwa yini emaminithini we-7 (ngoLwesihlanu ntambama).
16 March 2019 ku-07: 30
16 March 2019 ku-08: 36
Okumangalisa ukuthi kuleyo vidiyo enekhamera ekhanda lakhe, ubiza wonke umuntu futhi ubuyele ekudubula futhi ukuze aqinisekise ukuthi bafile ngempela. Kwesinye isiSulumane kunabantu abaningi abalimele, abaningi babo abafakela amafilimu futhi behlezi kumafoni abo. Kubonakala kimi ukuthi awuwutholi ifoni yakho esimweni esinjalo. Uzosiza abafowenu, kunjalo?
16 March 2019 ku-14: 19
Kungenzeka ukuthi ukubhekana nokuqhuma kwezindaba ukuba kube ngowokuqala ukubika amacala. Kodwa uma kuyiqiniso, kungukuphila kwabantu (abanomndeni, njll).
Izinto ezangihlaba umxhwele:
- imithombo yezindaba (enye imithombo yezindaba, i-PM, njll.) Ungalindela ukuthi amaphoyisa anikeze ulwazi mayelana nokuthi yiziphi izisulu nabanye.
- Inombolo yezisulu zashintsha esimweni esibucayi. Ukufa okuningi kunokulimala ngendlela.
- isithombe nesithuthuthu
- "Iziphathimandla aziqinisekisile ukuthi ungubani, ngoba kumele avele enkantolo ngoMgqibelo futhi usemsolwa ngokusemthethweni."
- "UBrenton Tarrant oneminyaka engu-28 ubudala uboshwe futhi wabekwa icala lokubulala (i-0700 ihora ngoMgqibelo uNZ isikhathi)
- "Kutholakale nezidakamizwa ezithintekayo emotweni eyodwa noma ngaphezulu." (?)
- "UNdunankulu uJacinda Ardern uqinisekisile ngaphambi kwengqungquthela yabezindaba ukuthi lo mqhudelwano ube nesisusa esicindezelayo" (okungakapheli isikhathi)
- Kumelwe ukuba kwakuyigazi elikhulu ... alibonakali ngokucacile
- "UNdunankulu waseNew Zealand, uJacinda Adern, wasabela ngokudabuka. Ukhulume ngokuthi "usuku olubuhlungu kakhulu" futhi akungabazeki: lokhu kwaba ukuhlasela kwamaphekula. " (ngaphambi kwesikhathi kwe-PM)
- "Ngokusho kwenhlangano yaseSyria, okungenani i-1 Syrian yafa." (umthombo ohlukile)
- "Kuzophinde kube nezingane eziningana phakathi kwezigameko. Ngokombiko wokuqala, lokhu kubhekane nezingane zaseSyria. '(ucabange, akunjalo?)
- 'Abantwana bakhe baqale umkhankaso wokuqoqa imali ukuze bangcwabe uyise e-Afghanistan. '(maduzane)
- "Ngokusho kwezindaba ezivela eBangladesh naseBDNews24.com, naye wabulawa ngesikhathi kuhlaselwa ngamaphekula. "(umthombo ohlukile)
- "Ngokomhlangano wezindaba zase-Saudi Al Arabiya, uMohsen al Muzaini wanqotshwa nokulimala kwakhe. "(umthombo ohlukile)
- "Omunye indodana ka-Khaled usaswele." (hhayi kumasikisi, noma inombolo yabantu abangakhonjwanga okwamanje?)
16 March 2019 ku-14: 31
... futhi ngokuqinisekile akukhathazeki nabo bonke abantu abafa ngezifo ezivinjelweyo kanye nendlala. Awekho izindaba ezisekho ...
16 March 2019 ku-16: 06
Lokho engikwaziyo ukuthi umenzi wobugebengu uyilungu le-Knights Templar (Freemasonry) futhi wayengathi amalungu ambalwa enhlangano ayenawo angama-veteran endala aseSerbian (paramilitary). Ngomuntu siqu, ngicabanga ukuthi umzabalazo weKosovo (ngenxa yezingxabano zezombangazwe zakamuva) ungahle ufike ezinyangeni ezizayo.
« Ucingo oluphuthumayo!
Umdlalo wevidiyo webhayisikili uBrenton Tarrant (ukusakaza bukhoma) ku-Christchurch eNew Zealand »
Ukuvakashelwa okuphelele: 13.147.815